सधैँ मुड अफ हुन्छ ? यसरी गराउनुस् फ्रेस - Samudrapari.com
काठमाडौं – हामी धेरै समय चिन्तामा गुज्रिरहेका हुन्छौँ । हामीलाई सधैँ खुसी रहन विभिन्न खालका चुनौतीले बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ ।
सोही कारण चाहेर पनि खुसी हुन सकिँदैन । यसले गर्दा शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा अस्वस्थ भइरहेका हुन्छौँ ।
त्यसो भए निरन्तर खुसी रहन के गर्ने त ? अथवा मुड फ्रेस गराउन के गर्ने त ? आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका लागि तनावलाई व्यवस्थापन गर्दै यसरी आफ्नो मुड फ्रेस गराउन सक्नुहुन्छ :
मनलाई खुसी बनाउन हाँसो सबैभन्दा राम्रो औषधि हो । यसले मुडलाई परिवर्तन गरेर खुसी बनाउन सहयोग गर्छ । हाँसोले शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक शक्ति पनि बढाउँछ ।
त्यसैले दैनिक केही समय चुट्किला पढ्ने, रमाइलो भिडियो हेर्ने बानी गर्नु राम्रो हुन्छ । आफू पनि हाँस्ने र अरूलाई पनि हँसाउने बानीले मुड फ्रेस बनाउन मद्दत गर्छ ।
संगीतले मानिसको मुड तुरुन्त परिवर्तन गर्न सक्छ । यसले तनावलाई सहज रूपमा हटाउने हुनाले अमेरिकातिर दुखाइ व्यवस्थापनका लागि म्युजिक थेरापी पनि गर्ने गरिन्छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले संगीतसँग खुसीको सम्बन्ध रहेको पनि बताउँछन् । त्यसैले तनाव हुन थालेपछि तुरुन्त मधुर संगीत, सुफी संगीत र शास्त्रीय संगीत सुन्दा मुड फ्रेस बनाउन सहयोग गर्छ ।
हामी सधैँ खुसी हुन प्रयास गर्छौं । आफूलाई जे गर्दा खुसी महसुस हुन्छ, सोही कार्यलाई दोहो¥याउनुपर्छ । बिहान उठेदेखि नै खुसी भएर दिनको सुरुवात गर्नुपर्छ ।
हरेक दिन खुसी हुने कम्तीमा तीनवटा कुरा स्मरण गरौँ । जसले हाम्रो शरीर, मन, भावनामा खुुसीको ऊर्जा सञ्चारित हुन्छ । दिनभरको मुडलाई ताजा बनाउन सहयोग गर्छ ।
व्यस्त एवं तनावपूर्ण समयमा ध्यानको महत्व धेरै छ । नियमित ध्यानको अभ्यासले तनावलाई व्यवस्थापन गरी आनन्द बढाउँछ । ध्यानका धेरै विधिमध्ये आफूलाई सजिलो लाग्ने विधिको अभ्यास गर्न सकिन्छ ।
जब मुड अति नै बिग्रन्छ, त्यतिवेला गहिरो लामो श्वास लिने र छाड्ने गर्न सकिन्छ । यसले मुडलाई तुरुन्त बदल्न सहयोग गर्छ ।